एक जीपीएस ट्रैकर एक अविश्वसनीय पार्टनर पकड मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? | सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर अटिजम / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
कसरी तपाईं जीपीएस संग एक धोखा पति / पत्नी पकड्न सक्नुहुन्छ? तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि कार कहाँ छ वा कहाँ थियो। तपाईंको जीवनसाथी होइन जहाँ उनीहरूले उनीहरूले भनेका थिए कि? के तपाईको कारको ठेगाना होटेलमा पार्क गरिएको छ? के तपाई काम पछि जहिले पनि उहि घरको भ्रमण गर्नुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने, तपाईंको पति वा पत्नीले धोखा दिन सक्छन्। जीपीएस को उपयोग एक चीटर पक्रन अपेक्षाकृत सजिलो तरीका हो। त्यहाँ कम जोखिम र काम छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई पछ्याउनु पर्दैन। तपाईं बस आफ्नो कम्प्युटरमा बस्नुहोस् र हेर्नुहोस्।
एक आदर्श संसारमा, प्रत्येक पुरुष र महिलाले उनीहरूको विवाह वाचा बमोजिम जीवन बिताउने थिए। दुर्भाग्यवस, यो सधैं केस हुँदैन किनकि पति / पत्नी अविश्वासी हुन्छन्। अविश्वास गर्नेहरू विरलै इमान्दार हुन्छन्। कसरी थाहा पाउने यदि तपाईं अवफादार हुनुहुन्छ भने? प्रमाणको लागि तपाईंले आफ्नो फोनमा एक नजर राख्नु पर्छ। टेक्नोलोजी र स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरूले सम्भव बनाउँदछ एक विश्वासयोग्य पतिलाई उसको ज्ञान बिना ट्र्याक गर्न। हामी तपाईको जीवनसाथी ट्र्याक गर्न धेरै विकल्पहरू अन्वेषण गर्छौं, पैसा खर्च बिना।
गोप्य एजेन्ट वा निजी जासूसहरूको युग समाप्त भयो; अब तपाईं उपकरणको साथ आफ्नो अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ कि जासूसी को लागी एक GPS ट्रैकर छ।
तपाईको इम्प्रूवईज्ड जासूस उपकरण: कम्प्युटर, एक फोन र जीपीएस ट्रैकर वा क्यामेराले सुसज्जित वस्तु!
यो लेख लेख्दा, हामीले यी उपकरणहरूको प्रयोगको बारेमा धेरै सिक्यौं। वास्तवमा, केहि बर्षको लागि, हामी सबैको निपटानमा फेला पार्न सक्दछौं (एक साधारण इन्टरनेट खोजीको लागि धन्यवाद) र सबै मूल्यहरूमा वस्तुहरू र जीपीएस ट्र्याकरहरूमा जासूसी गर्न। र हाम्रो आश्चर्य के थियो जब हामीले महसुस गर्‍यौं कि यी चीजहरू अधिकतर रूपमा किन्नु भएको थियो ...। उनको पति / पत्नी जासूस!
कसरी थाहा पाउने जब तपाइँको जीवनसाथी अविश्वासनीय छ
- तपाईंको अविश्वासी पति / पत्नीको सेल फोन ट्र्याक गर्दै - किन?
तपाईंको पति / पत्नीले व्यभिचार गरिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन जटिल हुन सक्छ किनभने व्यभिचार गर्ने व्यक्तिले उसले विरलै स्वीकार गर्दछ। त्यसकारण, तपाईंसँग काम गर्न सिग्नल बाहेक केही छैन। उदाहरण को लागी, एक पति यी परिवर्तनहरूको लागि उचित व्याख्या नगरी आफ्नो व्यवहार वा दैनिक तालिका परिवर्तन गर्दछ। यो बेवफाई वा गलतफहमीको संकेत हुन सक्छ। कहिलेकाँही, तिनीहरू कल गर्दैनन् वा फोनमा जवाफ दिदैन जब तपाईं कल गर्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हुन सक्छ कि तिनीहरूसँग कपटी छ, वा ड्राइभि .्ग छ र जवाफ दिन सक्दैन। यदि तपाईंले आफ्नो पति या पत्नीलाई शंका गर्नुहुन्छ भने तपाईंले उनीहरूले भाकल गरेका छन् कि भनेर जाँच गर्नुपर्नेछ। उत्तम विकल्प भनेको बेवफा पतिको सेल फोन ट्र्याक गर्नु हो कि तिनीहरूले बेवफाई गरिरहेका छन् वा छैनन् भनेर पुष्टि गर्न। बेवफाई विभिन्न रूप लिन्छ, विशेषज्ञहरूले अविश्वासी पुरुषहरूका विशेषताहरूको व्याख्या गर्छन्:
भावनात्मक - तपाईंको जीवनसाथी अरू कसैसँग एकताबद्ध छ, तपाईंसँग बिवाहित पनि।
भौतिक विज्ञान - जब तिनीहरूले अरू कसैलाई देखिरहेका हुन्छन्।
सर्कसमेन्टल - तपाइँको जीवनसाथी समय मा कार्य
तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंसँग कोठा साझा गर्न सक्दछ र अझै कसैसँग विश्वासघात हुन्छ। त्यसकारण, जानकारीको विभिन्न प्रकारहरू स collect्कलन गर्न तपाईंको साथीको सेल फोन ट्र्याक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, यदि तिनीहरू अविश्वासी छन् कि छैनन् भनेर निर्धारण गर्न। तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ:
- तपाई कुन मानिससँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?
सन्देशहरूका प्रकारहरू जुन उनीहरू लेखिरहेका छन्।
- ती ठाउँहरू जुन उनीहरू भ्रमण गर्छन्।
-Time एक स्थान मा खर्च।
के यो अविश्वासी जीवनसाथी ट्र्याक गर्न सम्भव छ?
यदि तपाईं कसरी अविश्वासी मानिसलाई ट्र्याक गर्न सोचिरहनु भएको छ भने तपाईंको लागि त्यहाँ थुप्रै विकल्पहरू छन्। तपाईको जीवनसाथीको गाडीमा जीपीएस उपकरण स्थापना गर्नु भनेको लागत प्रभावी तरीका हो। GPS ले तपाईंलाई तपाईंको जीवनसाथीको चालचलन वास्तविक समयमा ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँको पति / पत्नी कहाँ जाँदैछन्, दिन को केहि अवसरहरु मा, तब GPS उत्तम छ। GPS उपकरणहरू निश्चित रूपमा प्रभावकारी छन् र तपाईं धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्न। जीपीएस उपकरणहरू सँधै उपयोगी हुँदैन किनभने तपाईंसँग आफ्नो स्मार्टफोनमा कल जानकारी र पाठ सन्देशहरू पहुँच छैन।
बेवफाई पुष्टि गर्ने सब भन्दा सजिलो तरीका तपाईंको जीवनसाथीको स्मार्ट सेल फोन ट्र्याक गर्नु हो। फोनमा जासूस, यो सम्भव छ पाठ सन्देशहरू, कलहरू र तपाईंको पति / पत्नीको स्थानहरू ट्र्याक गर्न।
तर कसरी नि: शुल्क एक अविश्वासी जीवनसाथी को सेल फोन ट्र्याक गर्न? एउटा विधि भनेको तपाईको जीवनसाथीको आन्दोलन ट्र्याक गर्नुहोस् GPS को प्रयोग गरेर। धेरै जसो स्मार्टफोनमा GPS ट्र्याकि system प्रणाली हुन्छ तपाईको श्रीमान कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन। तपाईंले फोनमा कुनै ट्र्याकिcking उपकरण स्थापना गर्नुपर्दैन। जीपीएसमा भर पर्नुको असफलता भनेको कल, सन्देश, सम्पर्क, व्हाट्सएप कुराकानी र अधिक ट्र्याक गर्न असमर्थता हो। अर्को समाधान भनेको मोबाइल ट्र्याकि application अनुप्रयोग स्थापना गर्नु हो, त्यहाँ एन्ड्रोइड वा आईओएस प्रणालीहरूको लागि धेरै अनुप्रयोगहरू छन्। जासूस अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई आफ्नो पतिको सेल फोन ट्र्याक गर्न होस्ट सुविधाहरू दिन्छ, जीपीएस सहित।
GPS उपकरण ट्र्याक गर्न कसरी छनौट गर्ने?
तपाईंले जीपीएस उपकरण किन्नु अघि, केहि चीजहरू जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, तपाईं पारम्परिक GPS चाहनुहुन्न। यी प्रकारका प्रणालीहरू टेलिभिजनमा विज्ञापन गरिन्छ र अधिकतर खुद्रा दुकानहरूमा उपलब्ध हुन्छन्। हो, यी GPS उपकरणहरू हुन्, तर तपाई जस्तो मनपर्दैन। तिनीहरूले ड्राइभरहरूलाई निर्देशन दिनु पर्छ। तपाईं निर्मित स्क्रिनको साथ GPS चाहनुहुन्न। यी उपकरणहरूले कहिलेकाँही शोर गर्दछन् र उज्यालो स्क्रिनले उपकरणमा ध्यान आकर्षण गर्न सक्दछ, यदि यो राम्रोसँग लुकाईएको छ भने पनि। त्यसोभए, तपाईं कस्तो प्रकारको जीपीएस चाहनुहुन्छ?
पतिपत्नी, जो एक धोखाधडी जीवनसाथी पकड्न चाहान्छन्, अग्रेषकहरू प्रयोग गरेर GPS ट्र्याकरहरू जाँच गर्नु पर्छ। व्यवस्थापनले यी उपकरणहरू ड्राइभरहरू ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्दछ। उनीहरूले ड्राइभरहरू कहाँ छन्, निर्धारण गर्न मद्दत गर्छन् कि तिनीहरू तालिकामा छन् कि छैनन् र उनीहरू आफ्नो काम ठीकसँग गरिरहेका छन् कि छैनन्। यद्यपि यी सबै उपकरणहरू सवारी साधनहरूको समूह निगरानीको लागि डिजाइन गरिएको छ, प्राय: प्रणालीहरूमा व्यक्तिगत सवारीसाधन ट्र्याकिंग गर्न अनुमति छ।
लुकेका जीपीएस ट्र्याकरहरू वा फ्लीट जीपीएस ट्र्याकरहरू फेला पार्न इन्टरनेटमा एक मानक खोजी गर्नुहोस्। जब तपाईं चित्रहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईं एउटा सानो उपकरण चाहनुहुन्छ। तपाईं ठूलो स्क्रिन बिना ताररहित उपकरण चाहनुहुन्छ। कालो सबै भन्दा राम्रो रंग हो। तपाइँ के पाउनुहुन्छ हेर्न उत्पाद विवरण जाँच गर्नुहोस्। विस्तृत सिंहावलोकनको साथ प्रणाली अर्डर गर्नुहोस्। तपाई आफ्नो पति / पत्नीको कार कहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ भनेर ईमेल मार्फत जान्न चाहानुहुन्न। तपाई परिणामहरू नक्शामा प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ। गुगल नक्शाको साथ प्रोग्रामहरूको लागि खोजी गर्नुहोस् किनकि तपाईं उपग्रह छविको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ। जुम इन गर्नुहोस् र तपाईंको जीवनसाथीको कारको सटीक स्थान हेर्नुहोस्। यसले तपाइँ कुन भवनमा हुनुहुन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ।
एक धोखा पति जोडी समात्न कुञ्जी कुर्नु छ। तपाईको श्रीमतीको जीपीएस निर्देशांकका अनुसार उनी स्थानीय होटलको पार्कि lotमा छन्। उनको आगमन मा ठगेको आरोप लगाउनुहोस्। केही दिन वा हप्ताको लागि तिनीहरूको आन्दोलन ट्र्याक गर्नुहोस्। उनी कति पटक होटेल आउँछिन्? केवल किनभने तपाईंको पति या पत्नीले कामबाट घर जाने बाटोमा केही असामान्य विश्राम लिन्छन् यसको मतलब ऊ धोखा दिन्छ। लुकेका जीपीएस ट्रैकर प्रयोग एक आरोप निर्धारित गर्न को लागी आरोप छोड्नु अघि। एक पटक यो ढाँचा सेट भयो, अब के हुन्छ भनेर निर्णय गर्नको लागि यो तपाइँमाथि निर्भर छ।
9846 कुल दृश्यहरू 293 हेराइ आज